२०७८ मङ्सिर १९ आइतबार १८:४५:००
एमाले नेता भीम रावलले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका छन् । आइतबार साँझ ट्विट गर्दै रावलले सरकारका सबै कामकारबाही हुन दिई संसद् अवरूद्ध गरेको भन्नुको औचित्य नहुने बताएका छन् ।
यसअघि अध्यक्षको पदबहाली गर्दै केपी ओलीले माधव नेपाललगायत पार्टीले कारबाही गरेका एमालेका तत्कालीन सांसद उपस्थित हुने संसद् बैठक चल्न नदिने बताएका थिए । रावलले संसद् देश र जनताको पक्षमा बहस गर्ने, आवाज उठाउने थलो भएको स्मरणसमेत गराएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संसद् देश र जनताको पक्षमा बहस गर्ने र आवाज उठाउने थलो हो । सरकारका सबै कामकारबाही हुन दिई संसद् अवरूद्ध गरेको भन्नुको औचित्य छैन । कि सरकारले ल्याउने विधेयक र प्रस्ताव रोक्न सक्नुप¥यो । नभए त्यसबारे जनताको आवाज उठाउन पाउनुप¥यो । अन्यथा म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर् भनेझैँ ठहर्छ ।’
एमसिसी संशोधनविना संसदबाट पारित गर्नुहुँदैन : भीम रावल
सल्लाहकारको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै रावल भन्छन्–टीके प्रणाली जबज र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत
भीम रावललाई एमालेमा सल्लाहकारको जिम्मेवारी
भीम रावलको प्रश्न- संसद् अवरुद्धकाे औचित्य के? कतै होहल्लाको बीचमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने खेल त होइन ?
एमालेमा ओलीको नेतृत्वमा गुटबन्दीले छलाङ मार्‍यो : भीम रावल